नेपाली भूमिमा सडक बनाउदै भारत, पिल्लर नै गायब बनाउदै भूमि हडप्ने दाउमा
वि.सं २३ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:५२
कञ्चनपुर : कञ्चनपुरको उत्तरतर्फ पर्ने टनकपुर बाँध छेउको नेपाली भूमीमा भारतले एकलौटी ढङगबाट सडक निर्माण शुरु गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिका ९ ब्रम्हदेव बजार छुने गरी भारतीय पक्षले सडक विस्तार शुरु गरेको हो ।
भारतीय पक्षले आफ्नै भूमि भएको दावि गर्दैै ब्रम्हदेवको पुल देखी ब्रम्हदेव बजारसम्म झण्डै १ सय ५० मिटर सडक विस्तार गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले साउन दोस्रो सातादेखि ब्रम्हदेव क्षेत्रमा डोजर लगाएर सडक सम्याउने काम गरिरहेको छ ।
टनकपुर बाँध निर्माणकै बेला सीमा नम्बर ३ पिल्लर हराएको थियो । अहिले उक्त पिल्लर बिच नदिमा रहेको छ । बाँध निर्माणको समय देखि उक्त भूमि विवादित बन्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक सडक निर्माण गरिएको स्थान तीन नम्बर पिल्लर वारीको नेपाली भूमि रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
नेपाली भुमिमा रहेको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि भारतले चौडा बनाउन शुरु गरेको हो । बर्षौदेखि नेपाली बस्दै आएको क्षेत्र मिचेर भारतले सडक बनाउन लागेपछि केही नेपालीको उठिबास लाग्ने स्थिती आएको छ । समय समयमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले समेत हप्काउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
ब्रम्हदेब बजारको कल्र्भटमा भारतीय पक्षले ‘टिबिएम–३, टिबी डब्लु’ लेखेर सडक बनाउन चिह्न समेत लगाएको छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि भारतीय पक्षले एकलौटी रुपले नेपाली भुमिमा सडक विस्तार गरेको बताउँछन् ।
नेपाली भूभागमै सडक निर्माण भैरहेको विषयमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई भने कुनै जानकारी नै छैन । सडक विस्तारबारे नेपाली पक्षसँग कुनै सहमति नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त सीमा सर्वे टोली अनाउन्जेलसम्म काम रोक्न पत्रचार गरेको छ ।
नेपालतर्फको सीमा मिच्ने र केही नेपालीको उठिबास लगाउने गरि सडक निर्माण भैरहेको भन्दै भिमदत्त नगरबासी भने आक्रोसित भएका छन् । उनीहरुले नेपाली पक्षको सहमति विना एकलौटी ढंगवाट भारतले संरचना निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारतहमै कुरा गर्न समेत माग गरेका छन । भारतीय पक्षले आफ्नै भूमि भएको दावि गर्दैै टनकपुर ब्यारेजदेखि ब्रम्हदेब बजारसम्म झण्डै १३.५० मिटर सडक विस्तार गर्न लागेको हो ।
मुठभेडमै मारिएको हो त? खुट्टामा कसरी आयो चप्पल ? प्रहरी माथी शंका
एक बैंकको कार्डले अरुको एटिएमबाट पैसा झिक्दा कति शुल्क काटिन्छ ?